Ukuze ukwazi ukuthi ukuwina kumnyama blackjack, umdlali kudingeka ufunde izici ezimbalwa umdlalo ikhadi.
Zonke imidlalo ikhadi babe imithetho eqinile, okuyinto ngokuphelele akakwazi aphula. Ngakho-ke, labo imigomo ukunqoba esisemqoka, imithetho kufanele uhlole ngokuphelele. Kulo mdlalo, awayona kangaka.
Bdekdzhek wadlala emphemeni of amakhadi 52. Ngo amageyimu izikhungo isidlali oqaphelayo Ubungeke ukwazi ukubala ezisele izibuko emphemeni, ikakhulukazi ukudlala Deck Blackjack. Kodwa kukhona izindawo lapho kubhekwe ukuba enganele. Lapho ungathola umdlalo nge onezitezi eziyisishiyagalombili.
Izandla nomthengisi phezu umdlali ngamunye namakhadi amabili kubheke phansi. Okwamanje umthengisi ubeka ikhadi elilodwa (owokuqala) evulekile. Umkhawulo Yokuwina Inhlanganisela amaphuzu 21. Amakhadi ibe amanani ezinombolo alandelayo:
Ace - 1, noma 11, kuye ngokuthi yini ukubaluleka kungcono.
amakhadi Major (Jack, Queen, iNkosi) - amaphuzu 10.
ikhadi Lower (2 kuya ku-10) - amaphuzu ekhadini izinombolo.
Ikhadi amasudi kule game ayinakho incazelo. Okubalulekile ihlelo amakhadi kuphela. Ikhadi lakho le-akancintisani abalingani etafuleni, kodwa ngokuqondile kuphela ngamakhadi umthengisi sika. Inani amaphuzu ikhadi lakho ibizwa ngokuthi "isandla."
inhlanganisela kwamanani "izandla" yakho kufanele kube ephakeme kunaleyo kumthengisi. Lokhu kuqinisekisa ukuthi wena ngokuwina isandla. Uma ikhadi kuze umthengisi sika ace, umdlali kungathatha umshwalense, obiza isigamu ukubheja sakho sokuqala. Lokhu kuyokwenza ugcine umdlali ekulahlekelweni imali uma umthengisi uye ezisongwe "blackjack yemvelo" (inhlanganisela ace nekhadi amaphuzu 10).
Le nhlanganisela yiyona inzuzo kakhulu umdlali, ngoba ukuwina blackjack lokhu isethi lamakhadi kungaba isilinganiso 3 kuya 2. Zonke ezinye inhlanganisela kuholele ngokuwina abadlali zikhokhelwa esikhungweni isilinganiso 1 kuya ku-1.
ukulahlekelwa Sinemibandela iletha ingqikithi amakhadi akho idlula amaphuzu 21. Lesi simo sibizwa ngokuthi i "ngokudayisa".
Uma ikhadi umthengisi livuliwe uvezwa hhayi ace futhi yimuphi omunye ikhadi, umdlali has ithuba lokukhetha izenzo zabo phambili.
Kuye onjani amakhadi uphathwe e umdlalo we-blackjack, i isinyathelo isu lakho okunye kungaba kanje:
Okuningi - ubuza umthengisi elinye ikhadi. Isibalo sawo kukhawulwe isamba "izandla" wakho - 21 noma "ngokudayisa".
Enough - Umdlali okuqukethwe isikolo "isandla" yakhe, umthengisi kunikeza uphawu lokuthi sesivele izuzwe oyifunayo.
Stakeout. Uma noma yimaphi amakhadi zidingidwa umdlali kwenzakala ezimbili amaphuzu ikhadi efanayo, angase acele umthengisi ukwabelana ukulethwa bakhe sibe "izingalo" ezimbili. Ukuze wenze lokhu, kabili kokuqala Kona.
Ukubuyelela kabili - umdlali, beqiniseka ukuphakama amakhadi abo phezu kwalabo abakhululekile umthengisi, kuphakamisa ukubheja kokuqala kabili. Ngemva kwalokho, yena angakwazi ukuthola "isandla" ikhadi elilodwa kuphela.
Ukuvumela. Ezinye izinhlobo zama-imithetho umdlalo ukuvumela abadlali ukuze aqhube Ukuyekwa kwezindlela umdlalo ngenxa ukungaqiniseki ngokuwina nalabo etholakale lapho amakhadi zidingidwa. Esimweni esinjalo kuyohamba nomoya uhhafu kuphela izinga, kodwa hhayi lonke inani lonke.
Ukwazi lezi isimo okulula umdlalo, abantu bangahlala etafuleni amageyimu. Nokho, lokhu akwanele ukuphatha ukuwina blackjack.
Tindlela ethile yezenzo umdlali ungakwazi ukwandisa amathuba yokuhlala ukuwina umdlalo othandwayo. Nokho, ngaphambi kokuba ukuwina i-blackjack, qiniseka ukuhlola kungenzeka esemazweni isithakazelo ukunqotshwa olungenamkhawulo by search isamba amaphuzu.
amaphuzu "izandla" amathuba busting,%
Isu ukuziphatha Player kule game kusekelwe yokuthi wayazi ikhadi phezulu umdayisi sika. izenzo Futhi, kumele abadlali abafuna ukuwina eyaziwa ukuthathwa kumthengisi. Akayena umdlali, futhi usebenza ngokuhambisana imiyalelo ecacile ukuthi musa ukubeka isinqumo nokuguqulwa.
Yonke le mithetho ayizange yenzelwe e-Las Vegas ukuze ujike umuntu blackjack ethandwa kakhulu ikhadi imidlalo emhlabeni. Umdayisi has imiyalelo ecacile ukuthi kufanele ayithathe elinye ikhadi noma ukuyeka. Impumelelo iyiphi isu kule game Lwenziwe kuphela nokubikezela ukuziphatha umthengisi etafuleni ikhadi.
Icala lakhe soMkhulu bakhonile kuphunyula kuyo zibe yizicucu iyiphi isu ekuziphatheni umdlalo. Lapho ukulahlekelwa kulandelwa ngamunye ngamunye, umdlali ziqala ukwenzeka izinto eziyinqaba. Lapho zibona inyamalala ngamunye ngamunye iqoqo amazinga wabakhombisa izandla dexterous we nomthengisi, bambalwa kuphela ungagcina epholile futhi ukubala.
Ungqimba omkhulu wabantu ukugqekeza ukufutheka, ukuzivala amehlo wakhe ezama ukubuyisela izimali elahlekile. Isidlali liqala ukwenza umuntu eqhuma imizwelo, ukulahlekelwa ngokuphelele ukulawula umdlalo we-blackjack.
Amamephu asikubekezeleli imizwa, ngakho ezimweni ezinjalo ukulahlekelwa is ngenakugwemeka. Okuwukuphela kwekhambi elungile ekunqanyulweni ngokushesha the game.
Kukhona nenye indlela indlela ukuwina kumnyama blackjack eqinisekile - ungalokothi ugcine umdlalo imali noma intshisekelo. Khona-ke wena unethuba lokuba njalo phakathi abawinile.
Okusho phraseologism "ngeke kusale namkhonjwana." Umsuka nezibonelo
Indlela ukuphuma ukucindezeleka okukhulu nokucindezeleka?
Mars. Kwenqubo yokwakhiwa kwamakoloni planethi ebomvu ngaphandle
Magnitogorsk Isikhumulo sezindiza: umlando, imisebenzi, oxhumana nabo
Indatshana enesihloko esithi "Autumn": izibonelo lokubhala